Iincwadi ezi-7 zokuqhubeka nokufunda xa ubuyela esikolweni | Uncwadi lwangoku
Iincwadi ezi-7 zokuqhubeka uzifunda xa ubuyela esikolweni
Iiholide zidlulile kwaye uSeptemba ubuyisela ebomini ubomi bemihla ngemihla. Iwotshi yealam, umsebenzi, iishedyuli kunye ... ukubuyela esikolweni okanye kwiziko. Ikhosi entsha, abahlobo, ofunda nabo abatsha kunye nootitshala abatsha. Kwakhona iiklasi, iincwadi, umsebenzi wasekhaya, iimviwo, ikhefu ...
Kodwa ungaqhubeka nokufunda Ukuzonwabisa. Abancinci ukuba baqhubeke nokufunda ukuba bangayenza njani kunye nabadala nje kuba, kuba kuyonwabisa kwaye nawe uyafunda. Zezi Iincwadi ezisi-7 zomntu wonke. Ngamaxesha athile kunye nezihloko zakudala. Yonke inomdla.
1 ULulu uyasithanda isikolo - uCamilla Reid
2 Ndimncinci kakhulu ukuba ndingaya esikolweni - uLauren Child
3 Umceli mngeni esikolweni - iAidan Chambers
4 Isikolo sabucala-uCurtis Sittenfeld
5 Idayari kaGreg-uJeff Kinney
6 Kunyaka wokuqala eTorres de Malory kwaye amawele atshintsha izikolo-uEnid Blyton
ULulu uyasithanda isikolo -Camilla Reid
De 2013 kwaye kuphela Amaphepha ayi-24, Le adventure kaLulu ilungele uninzi abafundi abancinci. Zonke iincwadi ezikwisaga kaLulu, ezenziwe ngu Umbhali wase-Bhritane uCamilla Reid, zimnandi. Kwaye le yeyona ilungileyo kule mihla. Ingaba u Usuku lokuqala lukaLulu esikolweni yiyo loo nto esoyika kakhulu. Ingxaki kukuba akafuni kuthi ndlela ntle kunina kwaye eyona nto ayikhathaleleyo kukuba uza kwenza izihlobo na. Kodwa uLulu uthatha isigqibo sokuba akhaliphe kwaye afumanise ukuba isikolo singonwabisa kangakanani na.
Ndimncinci kakhulu ukuba ndingaya esikolweni - Umntwana waseLauren
Umntwana waseLauren UngumBritane naye kwaye neenkwenkwezi zakhe zothotho UJuan noTolola Yenye yezona zithandwa kakhulu kuncwadi lwabantwana lwangoku. Ingabonakala nakwithelevishini. Olu lonwabo luvela 2005 kwaye inamaphepha angama-39. UJuan kuya kufuneka aqinisekise udadewabo omncinci uTolola Lixesha lokuba aye esikolweni. Kodwa uTolola akaqinisekanga konke konke kwaye uJuan uzakufuna konke ukucinga ukuze ayenze.
Umngeni esikolweni Amagumbi e-Aidan
Amagumbi yi Umbhali odumileyo woncwadi lwabantwana nolutsha. Esi sihloko sika-2011 sele siyinto yakudala kwi ukuxhatshazwa. Ukususela kwiminyaka eli-12.
Isixelela ibali lika ULucy Hall, kuba ngubani ofunda naye esihogweni. Apho uMelanie Prosser kunye nabahlobo bakhe ababini balinde yena ngenjongo enye yoku yenza imini yakhe ibe krakra. ULucy akazi ukuba enze ntoni, kodwa ngethamsanqa uzakulufumana uncedo Ukusuka kumhlobo wakhe u-Angus nabanye asebenza nabo.
Isikolo sabucala -Curtis Sittenfeld
Le yayiyi inoveli yokuqala yalo mbhali waseMelika, epapashwe ngo 2005. un Umzobo wokufikisa nazo zonke ii-clichés zayo, kodwa oko kuhlala kutsala umdla.
Umlinganiswa ophambili ngu U-Lee Fiora, yintombazana eqhelekileyo efumana isifundi sokufunda kwikholeji eyaziwayo. Apho, abantwana beyona ntsapho ineempembelelo kwaye ingusozigidigidi kuluntu lwaseMelika bafunda kwaye u-Lee uziva ediniwe. Yi ixhaphake kakhulu, ke oyena mntu uthandwayo uyala, kodwa uyavuma.
Kwakhona isemfihlekweni luthando Umnqamlezo Sugarman, ekwahambelana naye. Yiyo loo nto beqala ubudlelwane kwaye uLee eyeka ukubekelwa bucala, kodwa ukusebenza kwakhe kuyehla. Yonke into ihamba gwenxa xa yakho isikhalazo esidlangalaleni malunga nezithethe kunye nemikhuba yesikolo esiphakamileyo esikhokelela emnqamlezweni ukuba buphelise ubudlelwane.
Kwidayari kaGreg -UJeff Kinney
Njani ukuba ungacebisi zakudala. Kwaye uGreg womdwebi wekhathuni waseMelika uJeff Kinney enye yezona ziphumelele kakhulu ukusukela kwakhe idayari edumileyo ngo-2006.
UGreg heffley Uneminyaka eli-12 ubudala kwaye umama wakhe uthenga iphephandaba ukuqala kwekhosi. Le yindlela esiya kumazi ngayo ngelixa esixelela ngamanye amaxesha akhe ahlekisayo (kwaye ngamanye amaxesha angabi kangako). Inkqubo ye- imizekeliso emikhulu kumhlathi ngamnye babhala ibali eligcweleyo Uburharha, uvelwano kunye nokufunda ngokulula bayo yonke iminyaka eneneni.
Ikhosi yokuqala eTorres de Malory y Amawele atshintsha izikolo -Enid uBlyton
Ewe kunjalo Iihambo ezikhulu zekholeji kwezona zikolo zidumileyo zokubhoda kulutsha loncwadi: UTorres de Malory noSanta Clara.
Enza uBlyton, Ukwangomnye wababhali abadumileyo koluhlobo, udale ezi zinto zimbini zibonakalisa ubomi kwi Ngokwesiqhelo isikolo se-english boarding yamantombazana. Ukuzonwabisa kwakhe kunye ne-antics, ukuhamba kwakhe, imidlalo yakhe lacrosse, amashwamshwam abo azele khekhe, ii-thermos zeti, ii-cookies ze-gingerbread, i-lemonade ... amaqela ebusuku.
Kwi Malory Towers (Saga ebhaliweyo ukusukela ngo-1946 ukuya ku-1951) ophambili Imilambo iDarrell. Kwiminyaka eyi-12 ngunyaka wakhe wokuqala kwaye uzakuqhubeka nokufunda apho ade abeneminyaka eyi-17. alicia kunye ne-Sally ethuleyo ... Kodwa kukho zonke ezinye ezifana UMary-Lou, uBetty, uKatherine okanye uGwendoline Mary. Kwaye ootitshala bayayithanda mzantsiweb Rougier kunye noDupont, Miss Potts, Mistress okanye Headmistress Grayling
Y Amawele atshintsha izikolo Sisihloko sokuqala se-saga yesikolo Santa Clara. Abalinganiswa abaphambili ngaba UPat noIsabel O'Sullivan, abafuna ukuya kwisikolo esinye nabahlobo babo, kodwa umama wabo uthathe isigqibo sokubathumela eSanta Clara. Kwaye nangona ekuqaleni besamkela, bagqiba kwelokuba bazinikezele yenza ububi ukuze batshintshe izikolo. Ewe yonke into iya kutshintsha xa besazi abo bafunda nabo kunye nootitshala.
Inkqubo ye- iintlelo ezintsha yezi zihloko zinemifanekiso ye UEnrique Lorenzo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Iincwadi zoLutsha » Iincwadi ezi-7 zokuqhubeka uzifunda xa ubuyela esikolweni
5 izinto ezintsha zokuwa. I-Auster, iPosteguillo, iMarías, iFollett kunye neSkal
Ukufundwa kwam okumnyama nepinki ngoJulayi nango-Agasti. Ukuhanjiswa kwe-2: iiroses.